Mpiasa fizahan-tany Jamaika maherin'ny 2,000 no vita vaksiny tao anatin'ny 3 andro voalohany nanaovana ny vaksiny
Home » Lahatsoratra farany farany » Karaiba » Mpiasa fizahan-tany Jamaika maherin'ny 2,000 no vita vaksiny tao anatin'ny 3 andro voalohany nanaovana ny vaksiny
Vaovao Mafana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Resorts • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Septambra 4, 2021
Misaotra anao - Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett, (mijoro) dia maneho fankasitrahana feno amin'ireo mpiasan'ny fizahan-tany nandritra ny vanim-potoana nandinihany azy ireo taorian'ny nandraisan'izy ireo ny vaksinin'izy ireo nofidiana tao amin'ny tranokalan'ny Moon Palace blitz ny zoma 3 septambra 2021. Nisaotra azy ireo izy satria nandray anjara tamin'ny fiarovana ny fizahan-tany. sehatra, amin'ny alàlan'ny fandraisana vaksinim-pamonjy aina.
Mpiasa fizahan-tany maherin'ny 2,000 ao Jamaika no vita vaksiny tamin'ny fampiasana ny iray amin'ireo vaksininy telo natokana ho azy ireo tao amin'ny tranokala blitz stratejika nokarakarain'ny Task Force Vaksinin'ny fizahan-tany vaovao, tao anatin'ny telo andro voalohany nanaovany hetsika lehibe. Ny Task Force, izay natsangana mba hanamorana ny vaksinin'ny mpiasa fizahan-tany rehetra manerana ny nosy, dia nikarakara andiam-pandrenesana vaksiny, ka ny voalohany dia natao ny 30 aogositra.
Fizahan-tany any Jamaika amin'ny fizotran'ny vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny mpiasan'ny fizahantany.
Tonga teny amin'ny toerana fanaovana vaksiny ny Lapan'ny Moon ny minisitry ny fizahantany sy ny filoha mpiara-miasa amin'ny vondron-kery vaksinin'ny fizahan-tany ao amin'ny Moon Palace mba hisaotra ireo ekipa sy mpiasa.
Toerana maro no hatsangana ao Negril, Ocho Rios, Montego Bay ary ny morontsiraka atsimo miaraka amin'ny fanantenana fanaovana vaksiny hatramin'ny olona 600 isan'andro isaky ny toerana.
Taorian'ny vaksinin'ny mpiasa 1,200 30 tao amin'ny Hotely Pegasus tamin'ny 2 Aogositra, nandritra ny roa andro (3-556 septambra) dia nahita mpiasa 3 mpizahatany nifidy vaksiny ny Sandals Negril, raha tao amin'ny Lapan'ny Moon tao Ocho Rios ny zoma 385 septambra lasa teo , mpiasa 320 teo ho eo no vita vaksiny. Na izany aza, Moon Palace dia nanana blitz teo aloha izay mpiasa 60 no nandray ny jab ary hatramin'izao ny XNUMX isan-jaton'ny mpiasa dia nanao vaksiny.
Jamaika Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett, ary mpiara-mitarika ny Vondron'asan'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany, Clifton Reader, dia teo amin'ny toerana fanaovana vaksiny Moon Palace mba hijery ny fandidiana ao ary hisaotra ireo ekipa izay miara-miasa ao anatin'izany ny mpitsabo mpanampy sy ny dokotera avy amin'ny sehatra tsy miankina izay mandray anjara amin'izany.
Nilaza ny minisitra Bartlett, "ny fandraisana andraikitra dia fiaraha-miasa eo amin'ny Minisiteran'ny Fizahantany, ny Hotely momba ny fizahan-tany sy ny fizahantany ao Jamaika (JHTA), ary ny Initiative Vaccine for Sector Private (PSVI) hitarika ny vaksinin'ny mpiasa 170,000 amin'ny indostria manerana ny faritra rehetra sehatra. ”
Na dia nanaiky aza izy fa baiko avo dia avo io, dia nantenaina Andriamatoa Bartlett satria "hitanay ny fahavononan'ireo mpiasa ankehitriny porofon'ireo fivoahana hitantsika tao anatin'ny 3 andro lasa izay nanomboka ny fandaharana."
Nilaza izy fa hisy tranokala blitz bebe kokoa hatsangana ao Negril, Ocho Rios, Montego Bay ary ny morontsiraka atsimo miaraka amin'ny fanantenana hanome vaksiny olona hatramin'ny 600 isan'andro. "Ny tanjona dia ny tsy hametrahana amin'ireo fotodrafitrasa momba ny fahasalamana misy mba hahafahan'ny programa vaksinim-pananahana ity, ka ny dokotera, ny mpitsabo mpanampy ary ny fikarakarana fotodrafitrasa rehetra dia omenay amin'ny alàlan'ny fiaraha-mitantana," hoy izy.
Nanao antso manokana ho an'ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fianakaviany ary ny namany akaiky ny Minisitra mba hiditra amin'ireo tranokala blitz voalamina manokana izay manome vaksinin'ny AstraZeneca, Pfizer ary Johnson & Johnson maimaimpoana. "Tsy mitodika olona izahay," hoy izy nanamafy.
Mandritra izany fotoana izany, Andriamatoa Reader izay filohan'ny JHTA ary talen'ny fitantanana ny Moon Palace, dia nilaza fa ny fifaliana ho an'ny mpiasan'ny hotely dia “nandeha tsara ka tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny hanokatra azy io izahay tsy ho an'ny fianakavian'ireo mpiasa ihany fa ny ny mpivarotra asa-tanana, ny mpitatitra, ny mpiasan'ny villa ary ireo izay manintona. ” Ireo olona mahazo ny fatra voalohany aminy ao amin'ny Moon Palace dia hasaina hiverina amin'ny fatra faharoa.
Nosokafana ho an'ny tranokala blitz ny gorodona manontolo an'ny elatra andrefan'ny hotely ary nandehandeha namaky fandroana fanadiovana mandeha ho azy ireo mpandray anjara alohan'ny nidirany tao amin'ilay toerana izay nandraisana azy ireo taminà fampisehoana an-tsary momba ny virus sy vaksinin'ny COVID-19 ihany koa.
Nilaza Andriamatoa Reader fa ny trano fandraisam-bahiny lehibe manana ny fahaizany manao izany dia namporisihina handoa ny saram-pitantanana mba hahazoana antoka fa izay rehetra tonga dia tsy mila mandoa na inona na inona hatao vaksiny. "Mila tontolo iainana azo antoka ho an'ny olona izahay ary ny fomba tokana anaovana izany dia amin'ny alàlan'ny fanaovana vaksiny," hoy Andriamatoa Reader.
Spa Attendant ao amin'ny Moon Palace, Chevanise Williams dia nilaza fa takany fa tsy fanasitranana ny COVID-19 ny fandraisana vaksininy fa "raha tratranao ny viriosy dia fantatrao fa tsy dia ho henjana kokoa ny soritr'aretina, noho izany… zava-dehibe ho ahy ny mandray satria tokony hiaro ny fianakaviako sy ny olona tonga eto koa aho. ”